वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : यो पनि 'बलि'नै हो
देश बाहिर बसिएको छ मन उदास हुनेनै भयो, त्यो पनि यो दशैंको बेलामा।
अचेल सधैंभरि मलाई आफू शाकाहारी हुन नसकेको पछुतोले पनि टोकिरहन्छ। नेपालमा दशैं पशुपंक्षी-हत्याको पर्याय बनेकोले दशैंको यो बेलामा झन बढी टोक्छ मलाई मेरो पछुतोले। हो मलाई थाहा छ, मासु खान नछोडुञ्जेल जनावरमाथि हुने हिंसाको मैले विरोध गर्नुमा कुनै दम छैन।
आज कान्तिपुर अनलाईन हेरेपछि झन नरमाइलो लागेको छ। काठमाण्डौंकी नयाँ कुमारीको रुपमा चुनिएकी बालिकालाई उनका अभिभावकले बोकेर कुमारीघरतिर लाँदै गरेको तस्वीर छ त्यहाँ। यो तस्वीरले मलाई पर्सिएर गिँड्न तयार गरिएका खसी-बोकाको याद आयो अचानक। कथित संस्कृति र परम्पराको जसले जतिसुकै दुहाई दिउन्, ती निर्दोष वालिकाको सुन्दर बाल्यकाललाई बलि दिइएको नै हो यो।
विगतमा परम्पराको नाममा मरेको लोग्नेसंगै जिउँदै जलाईन्थ्यो नारीलाई। त्यस्ता परम्परालाई जोगाउन पनि विगतका 'सांस्कृतिक ठेकेदार'हरु यसरीनै संस्कृति र परम्पराको दुहाइ दिन्थे होलान्, तर ती जोगिन सकेनन् किनभने तिनले मानव अधिकारको चरम हनन् गरेका थिए, ती क्रूर सामन्ती समाजका उपज थिए। हाम्रो उपत्यकाको कुमारी प्रथा पनि सामन्ती समाजको अवशेषमात्रै हो। विगतका केहि सामन्ती शाशकहरुको लहडका कारण युगौं-युगदेखिका बालिकाहरुलाई दास बनाएर राखिएको छ, देवी बनाउने निहुँमा। कथित अभिभावकहरुको कुनैपनि निर्णयको विरोध गर्न नसक्ने यस्ता कलिला बालिकाहरुको बाल्यकाल खोस्ने कस्तो 'महान' संस्कृति बनाएको र मनाएको हो हाम्रो समाजले?!
यो प्रथा सामन्ती राजतन्त्रसंग जोडिएर आएको प्रथा हो। देशबाट राजतन्त्र गयो तर यस्ता कुप्रथामाथि अझै सशक्त आवाज उठेको छैन। हात्तीहरु एक-एक गरी 'छिर्दैछन्' तर पूच्छरहरुले अझै हामीलाई विगतमै 'अड्काइरहेका' छन्। के प्रमाणित हुँदैछ भने राजनीतिक मौसम जति फेरिएपनि साँस्कृतिक रुपमा हामी अझै ४०० वर्ष पहिलेकै निद्रामा छौं।
गणतान्त्रिक नेपालको पहिलो राष्ट्रपतिले, पहिलो सरकारले यसबारेमा अलिक आँट लिन सक्नुपर्थ्यो। कमसेकम वहसमा यसको विपक्षमा आफूलाई उभ्याउनुपर्थ्यो र राज्यलाई यो निर्दयी प्रथाबाट अलग बनाउन सक्नुपर्थ्यो।
अनि, संविधानमा देशलाई धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ तर हिजो राजाले गर्ने सबै काम राष्ट्रपतिले गरेका छन्। देश कसरी धर्मनिरपेक्ष भयो?!
हेर्नुस् बलि चढाईँदै गरेको एउटा निर्दोष सुन्दर बाल्यकाल!
थाहा छैन अझै कतिञ्जेल टिक्ने हो यो बलिप्रथा????
Posted by Basanta at 4:25 PM
vivaforever October 8, 2008 at 11:58 PM
बडा दशैको मंगलमय शुभकामना दाई अनि परिवार स्पेसल्ली नानुलाई :)
बेदनाथ पुलामी ( उमेश ) October 9, 2008 at 5:40 AM
बसंत जी तपाइले त राम्रै बिसयबस्तु लाइ उठाउनु भएको रहेछ मलाई त ठीक लाग्यो । म पनी एउटा शाकाहारी परे र शाकाहारी भोजनै राम्रो लाग्छ ।
अनि कुरो आयो अन्त्य - बलि प्रथा को , मान्छेहरु जंगली भये जे पनि निल्न सक्दारहेछं - खाली आफ्नो मात्र खुसी र आनन्दको सपना संगाल्दा रहेछन - जती वैज्ञ्यानिक युगको भने पनी र शिक्षित भएपनि - उस्तै हो - ....... खोई के के को .....पुछार १२ वर्ष ढुङ्ग्रामा लाए .........पनी उस्तै भने जस्तै हो ।
Basanta Gautam October 9, 2008 at 10:22 AM
vivaforever, धन्यबाद शुभकामनाको लागि।
तिमीलाई पनि हार्दिक मंगलमय शुभकामना विजया दशमीको!
पुलामीजी, तपाईँ शाकाहार भएको थाहा पाउँदा खुशी लाग्यो। म पनि विस्तारै मासु घटाउँदै र शाकाहार बढाउँदै लैजाने विचारमा छु।
मान्छेभित्रको आदिम जंगली प्रवृत्ति अझै उस्तै छ, यसैले जनावरमाथि हिंसा गर्न छाडेको छैन मान्छेले। जंगली युगमा मान्छेले मासु खानु स्वाभाविक थियो बाँच्नको लागि तर अब जनावरको मासु नखाएपनि सजिलै बाँच्न सकिने युगमा पनि मान्छेले मासु खान छोडेका छैनन्।
(यी सबै कुरा भनिरहँदा आफू अझै शाकाहारी बनिनसकेकोमा लाजचाहिँ खुब लागेको छ।)
अन्त्यमा फेरि एकपटक यहाँलाई बडादशैंको हार्दिक मंगलमय शुभकामना!
badri October 9, 2008 at 1:14 PM
yo baalikaa bali chadaune prathaa chahi hataaunu parchha..